Isilinda esigqibeleleyo somgangatho weHDPE omkhulu weSilinda kunye neFektri | Erbo
Ithagethi yethu kufuneka ibe kukudibanisa kunye nokuphucula umgangatho ophezulu kunye nokulungiswa kwempahla yangoku, okwangoku ukuvelisa isisombululo esitsha ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezizodwa kwiBucket yePlastikhi esandula ukufika, Senza konke okusemandleni ethu ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo abathengi abaninzi kunye noosomashishini.
Ukufika okutsha kwePlastiki edadayo, Inkampani yethu ifumana izimvo ezintsha, ulawulo olungqongqo lomgangatho, uluhlu olupheleleyo lokulandela umkhondo weenkonzo, kwaye zilandela izisombululo ezikumgangatho ophezulu. Ishishini lethu lijolise "kukunyaniseka nokuthembeka, ixabiso elifanelekileyo, umthengi kuqala", ngenxa yoko siphumelele ukuthembela kuninzi lwabathengi! Ukuba unomdla kwiimveliso zethu kunye nezisombululo kunye neenkonzo, kufuneka ungathandabuzi ukunxibelelana nathi!
Sihlala sicinga kwaye siziqhelanisa nokuhambelana notshintsho lweemeko, kwaye sikhule. Sijonge ukufezekisa ingqondo nomzimba otyebileyo kunye ne-2019 yoPhuculo lwePlastiki edadayo yangoku, Sigcina iishedyuli zokuhanjiswa kwangexesha, uyilo olululo, umgangatho ophezulu kunye nokwenza izinto elubala kwabathengi bethu. Imoto yethu iya kuba kukubonelela ngempahla esemgangathweni ephezulu ngaphakathi kwexesha elimiselweyo.
2019 yakutshanje Uyilo lwePlastiki edadayo Ibhakethi, Sizimisele ukusebenzisana neenkampani zangaphandle ezikhathalele kakhulu kumgangatho wokwenene, ukubonelelwa okuzinzileyo, ukubanakho okunamandla kunye nenkonzo elungileyo. Sinokunika elona xabiso likhuphiswano nomgangatho ophezulu, kuba sibe ziingcali ezininzi. Wamkelekile ukuba utyelele inkampani yethu nangaliphi na ixesha.
Egqithileyo IHDPE Isilinda Esikhulu Esidadayo Esilihlaza
Okulandelayo: Isilinda esincinci se-HDPE esincinci